Rostov State University Medical - Mbbs Study in Russia
Medical Rostov State University Details
City : dubay
gaabinta : RSMU
Ha iloobin in aad wada hadlaan Rostov State University Medical
Qorto Rostov State University Medical
The Rostov University Medical State waa tababar iyo cilmi xarunta ugu weyn ee aasaasiga ah ee ka jira Koonfurta Russia. In ka badan 85 sano jiritaankeeda waxay noqotay mid adag oo a kala duwan leh 10 waaxyaha, Medical College, Tababarka Ciidanka Center iyo Clinic u gaar ah.
dhakhaatiir sare iyo sare ee dalka ayaa la aasaasay oo ku saleysan University Medical Rostov State The dugsiyada ay waaweyn ee sayniska, madax by the Workers Sharafbadanyahay of Science, Shaqaalaha dugsiga sare, Dhakhaatiirta Sharafbadanyahay, Shaqaalaha Sharafbadanyahay Caafimaadka iyo Dhaqanka, iyo sidoo kale saynisyahano dunida-caan.
Maanta in University Medical Rostov State The shaqeeyaan 92 waaxyaha, ugu yaraa oo ka mid ah waa Department of Law Caafimaadka. In ka badan lix boqol oo macalimiinta si joogto ah shaqeeya bandhigid tabo cusub iyo noocyada is-dhexgal ah ee waxbarashada. iyaga ka mid ah waxaa jira in ka badan 119 Dhakhaatiirta of Science, Professor iyo ku saabsan 350 PhD. The aqoonyahano iyo Professor kuwaas oo ka shaqeeya our University haatan sii wadaan horumarinta dhaqanka ugu fiican ee ka horreeyay, waxay.
Nidaamka of Education Dheeriga ah waxaa loo qaybiyaa dhowr qaybood. Jaamacadda waxaa tababar barnaamijyo dhakhaatiirta iyo ururo caafimaad oo dhan ka ah South of Russia. Sanad kasta oo ku saabsan 8000 dhakhaatiirta waxaa waxarashada on Tababarka Kuliyada ah, in ka badan 1000 layliyo iyo dadka degan - at Kuliyada Islasocodka Professional. Intaa waxaa dheer, Jaamacadda waxay leedahay Kuliyada diyaarinta a on Tababarka Citizens Dibadda, maxaa yeelay, University Medical Rostov State waa dugsi caafimaadka ee caalamiga ah in ay tababar wakiillo ka badan boqol Jinsiyadaha iyo qowmiyadaha ka soo adduunka oo dhan.
Shaqada sayniska waxaa lagu qabanqaabiyaa oo isku by waxqabadka sayniska iyo cilmi-baarista iyo la dhaqan gelin waaxaha iyo koorsooyinka. The Laboratory Sayniska Research Dhexe (CSRL) hawlaha wax ku ool ah, halkaas oo tiro balaadhan oo ah lagmamaarmaanna, kelli-hidde, morphological, waxbarashada microbiological wadnaa. Waxaan leenahay Machadka Sayniska iyo Cilmi-baarista ee immunology, waxaana ay qorshaynayaan in ay leeyihiin Machadka Sayniska iyo Cilmi-baarista ee urology iyo neerfaha. Cilmi sayniska waxaa lagu sameeyey 5 tilmaamaha sayniska aasaasiga ah: dhibaatooyinka caafimaad-noolaha; dhibaatooyinka dabiiciga ah-nadiif ah (deegaanka iyo caafimaadka) ilaalinta caafimaadka dadweynaha; shaqada sayniska iyo ururka ka hortagga, ogaanshaha iyo daaweynta haweenka, hooyooyinka iyo cudurada ugu waaweyn ee carruurta; shaqada sayniska iyo ururka ka hortagga, ogaanshaha iyo daaweynta cudurrada qalliinka; shaqada sayniska iyo ururka ka hortagga, ogaanshaha iyo daaweynta cudurada ugu waaweyn ee gudaha.
Waxaa jira 3 PhD-Guddiyada for Ph.D. iyo dissertation phD difaaca.
University Medical State Rostov ayaa horumarisa iskaashiga caalamiga ah cilmiyeed la dalal badan oo kala beddelashada shaqaalaha sayniska, ardayda, macalimiinta, khubarada aqoon sare le iyo ka qeybgalka shirarka cilmiyeed iyo miyi ah oo caalami ah.
The Clinic of our University waa hay'ad caafimaad oo multi-beer, taas oo uu leeyahay fursado badan oo cilmiga cudur-casri ah oo heer sare ah wadatashi gaar ah wax ku ool ah, daryeelka cudurka iyo caafimaadka dadweynaha ee gobolka Rostov iyo dhulal kale oo ka mid ah Degmada Federaalka Koonfurta iyo Ruushka. Sidoo kale waa saldhig tababar ugu weyn, taas oo uu leeyahay oo dhan xaaladaha nidaamka waxbarasho ee la isticmaalayo foomamka sare iyo hababka tababar iyo guulaha casriga ah ee sayniska caafimaadka. In Clinic ee ardayda u bartaan xirfadaha loo baahan yahay oo aad hesho qof aqoon u leh qalab caafimaad oo casri ah ugu.
The Clinic ee RSMU ka mid ah 20 unugyada bukaan-jiifka la 675 sariirood (lugu daro 125 sariirood xannaano maalmeedka), 2 Departments of Anesthesiology iyo kicinta, Waaxda bukaan-tashiga, Waaxda ilkaha ah, Mfaray Cgalaan, Cgeli of Medical indhaha, 13 caafimaad-diagnosthoosaadyada ic, Dhiig Technology Center. Maanta shaqaalaha rugta caafimaadka waxay ka kooban tahay353 dhakhtars, lugu daro 11 Professor, 28 Dhakhaatiirta of Science Medical iyo 52 PhD;in ka badan 30 shaqaalaha jaamacadda waa takhasus dibadda ugu weyn iyo khubaro ka mid ah Wasaaradda Caafimaadka ee Federation Ruush ee Degmada Koonfurta Federaalka, Wasaaradda Caafimaadka ee gobolka Rostov iyo degmada Council «Maamulka caafimaadka ee Rostov-on-Don».
Sanadihii la soo dhaafay ka dhexe iyo qalabaynta of waaxaha badan cudurka iyo caafimaadka of our University loo ogol yahay in ay xooga saarto iyo sida qumman isticmaalaan shaqaalaha, qalab caafimaad, loo hagaajiyo tayada shaqada ee unug kasta oo dhisme ah oo la abuuro technology ka ah geedi socodka caafimaadka-ogaanshaha joogto ah.
Rectorship wuxuu dhigaa si gaar ah xooga on ururka habka waxbarashada Jaamacadda. Maalmahan waxaan hirgeliyaan qaabab is-dhexgal ah oo tababar iyo computerize geedi socodka waxbarashada. The Professor iyo macallimiintii University ugu fiican fursad u leeyihiin inay mari dabcan ah internship ee rugaha caafimaadka iyo jaamacadaha of Europe.
Under xaqiijinta mashruucan qaranka mudnaanta «Caafimaadka» Maamulka of University waxaa si firfircoon horumarinta iyo wax ku ool ah fulinta barnaamijyada casriga ah ee dayactirka caafimaadka bulshada ee carruurta iyo dhallinyarada ee caafimaadka ku ool ah. Under xaqiijinta hawsha waxbarasho ee mashruuca mudnaan qaranka gudbikaraa oo ka mid ah dhakhaatiirta daryeelka caafimaadka ee gobolka Rostov iyo gobolka oo dhan Caddaan waxaa si guul ah loo tababaray ee jaamacadda our.
General Medicine Kuliyada RostGMU;
Kuliyada of Pediatrics;
Kulliyadda Ardayda International
Kuliyada wadashada iyo Waxbarashada joogtada ah;
Kuliyada Qalabka Force Medicine;
Kuliyada Sector Ingiriisi
In 1915, Division of Medicine ee Warsaw University Ruush la dhaqaaqay Rostov on Don iyo in siiyey kor u qaada maalinta la joogo Rostov University Medical State. Waxaa markii hore la sameeyey sida waaxda a iyo ka dib loo beddelaa Machadka caafimaadka ee 1930. Waxaa jiray oo ku saabsan 295 qalin dhakhaatiirta ee fasalka qalan jebiya koowaad ee dugsiga cusub ee la sameeyey.
Sababo la xiriira kala duwanaanta ardayda in ay ka qayb-galay Jaamacadda, abaalmarinta Order of Friendship waxaa la guddoonsiiyey Jaamacadda ee 1980. Iyada oo ardayda ka dhan qeybo ka mid ah dunida oo wakiil.
In 1994, Rostov Machadka Caafimaadka taas oo tababar ugu weyn ee aasaasiga ah, Xarunta cilmi-baarista iyo daaweynta ee koonfurta Russia waxaa magacooda loo baxshay University ee Rostov Medical.
Ma rabtaa wada hadlaan Rostov State University Medical ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Rostov State Medical on Map
Photos: Rostov State University Medical rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Medical Rostov State
Ku biir si uu ugala hadlo ee Rostov State University Medical.
Ufa State Petroleum tignoolojiga University Ufa
Bauman Moscow State University Technical Moscow